Biby goavam-be lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ny iray amin'ireo andry mahafinaritra indrindra, dia maimaim-poana lalao Biby Goavam-tserasera. Eto dia hihaona sy milalao miaraka amin'ny hafa maro tontolo izao, ianao mianatra ny fahazarana, mianatra hiatrika ny ratsy fanahy, na ho namana. Indray mandeha tamin'izao andro Sekolin'ny Biby Goavam, toa mampahatahotra intsony ny mponina, raha kely amin'ny chat aminy. Fa tamin'ny dikan mahazatra, dia hamely anareo, ka tsy maintsy hiaro. Afaka mampiasa izay fomba rehetra: basy marovava, grenady, na legioma izay mitombo ao amin'ny kianja. Aza tsy ary miady ny anankiray tamin'ny iray, nandeha hamely an'i azy ireo tamin'ny antsy.
Taptastic Biby Goavam
Mandresy ilay Monster
Tsindrio ny tap Monsters
biby goavam-be Up
Tokony ho faty ny mpamono olona: Fandevenana fasana
Ny ady amin'ny ny biby goavam-be
Horde ny ratsy
Aoka izy ireo hiady
Ultraman Adventure Island 3
Zombies fihinanan- Stocking
Tsy afaka misoroka ny zombie
Pixel Apocalypse Infection Bio Bio
an'ny hafa firenena Fanafihana
Best namana vatomamy
Super dity Stacker
Lalao Biby goavam-be tamin'ny Category:
Farany Monster lalao
Biby goavam-be any ambanin'ny tany
Fanafihana ny maty
Miverina any amin'ny helo
Fifandonana epic defense
Lalao Online Rehetra Biby goavam-be lalao an-tserasera
Tsy mahatsiravina lalao Biby Goavam
mahatsiravina biby goavam-be sy ny tsara tonga soa anao any amin'ny lalao lehibe Goavam, izay dia hahita;
Ny mandeha Maty,
vahiny avy any ivelany toerana,
Volovoloina ny werewolf.
Aza matahotra ny vazany dia vazan'ny sy ny valanoranony ny zavaboary ireo. Maro ny biby goavam-be dia tena mahafinaritra sady tsara, fa ny sisa dia afaka mora foana mitantana, mitam-piadiana ny nify.
ny fiainana am-pilaminana biby goavam-be
lasa sekta litera Monster High School, izay ihany no mijery tsy mahazatra, ary ny sisa dia mitovy mikasika ny olana toy ny tanora hafa. Dia nitondrany nify sy ny faharatrana, volo ary manao akanjo Fashionably fitiavana. Miaraka, dia hiomana ny daty, mba hitady ny lalana avy tao an-efi-trano, mba hiomana ho amin'ny fialan-tsasatra sakafo sy ny fanatrehana vatolampy fampisehoana, mba hanadio ny trano araka ny antoko, ary hitondra ny tenako ao hatsaran-tarehy Salons, hanoroka sy hanao famolavolana.
Vahiny ny zava-drehetra dia tsy mamoy fo ary vonona ny hanampy ny olona eo amin'ny ady atao amin'ny mpanao herisetra. Dia namboatra ny sambo eo amin'ny toerana tsy azo nidirana ny olona, ​​hizara ny sandriny sy hanome honenana nosy, miandry ny famonjena avy any an-trano mivezivezy planeta. Aoka Aza afangaro ny fomba fijeriny anareo, ary isika no antoka tsy toa tena manintona.
Ny zombies, vampira, mpamosavy sy ny taolany nanorina ny fisotroana kafe, ary ankehitriny dia manompo ny toerana tena zava-pisotro sy ny vilia. Miasa izy ireo bartender, fanomanana hanim-py ny hala, ramanavy elatry, eyeballs, asidra zhabih fiteny. Mitabataba indrindra dia mahazo ny Halloween, rehefa mifoha ny ratsy rehetra ka lasa ho amin'ny andro firavoravoana ny voninahitra.
noho ny ady mahery fo
Ireo biby goavam-be izay tsy mety miara-miaina amintsika tamim-pilaminana, dia ho voasazy. Sandry:
basy sy fitaovam-piadiana bladed,
tongolo gasy sy ny rano masina,
Ny hitarika ny ady amin'ny biby mety hisy fomba azo atao. Ny sasany zombies Matahotra hatramin'ny voly legioma, ary ady mety ho pitipoà, serizy hazo sy zava-maniry hafa maniry amin'ny lavarangana fidirana amin'ny trano. Etsy an-mora kokoa ny mahatakatra, fitifirana avy amin'ny milina basy na sabatra manorotoro ny lohany. Aza ho diso ny hametraka ny nipoaka projectile, miandry ny vahoaka ny zombies dia ho matevina, ary avy eo dia hanimba azy.
eto amin'ity tany ity tsy misy toerana tezitra vahiny sy ny hafa firenena no fanadihadiana haingana sy manokana, tifitra ny sambo, nandrava ny tany, misambotra ao amin'ny rano. Aoka handeha an-trano raha tsy afaka miara-miaina.
Ny Action dia hijery isan-joron'ny efitra iray na misokatra faritra, mijery mamitsaka fahavalon'ny olombelona. Foana ny fitaovam-piadiana vonona ny hanolotra ny knockout-misy fanapahan-kevitra kapoka ho amin'ny biby goavam-be tampoka nitsambikina avy. Zava-dehibe tsy mba very sy tsy natahotra hanome tsiny ny mierona, tsilo maso, nify sy ny valanoranony lehibe maranitra. Ny sasany dia afaka handrora asidra, ka ho vonona ara-potoana, ary jumps.
Indraindray, mba hamono ny biby goavam-be ho haingana dia tsy maintsy manindry eo aminy, toy ny tamin'ny raharaha ny lalao clickers. Tsy nanafika, ary miandry fotsiny rehefa manao Vendetta. Isaky ny biby goavam-be resy accrued hevitra, ary afaka mampitombo tsikelikely ny hery famonoana.
Manohitra ny biby dia tsy hanao zavatra irery, fa teo amin'ny antokon'i mahery fo ny tantara an-tsary sy ny Comics. Maloto ady:
mitondra ny mpiara-monina,
Dora sy ny maro hafa.
Ady nivelatra amin'ny toe-javatra isan-karazany, ary dia ilaina ny mampifanaraka ny toe-javatra rehetra, dia azy ny trano, eny an-dalana, ala mikitroka, tani-hay, na ny trano-maizina. Dikan lafin-javatra tsirairay dia nanatitra, ary afaka hilalao Lego biby goavam-be, hovonoiny ilay dragona avy any Shanghai, toeram-piompiana na hampitaovana ny efitrano manidina mpilalao ody amin'ny broomstick ary hanomana ody molotov.